Finfinnee keessatti lafti meetir iskuweerii 242 qarshii miliyoona 86’tti gurguramte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Finfinnee keessatti lafti meetir iskuweerii 242 qarshii miliyoona 86’tti gurguramte
Sadarkaa addunyaatti Finfinneen magaalota lafti hedduu itti qaalii ta'an keessaa takka ta'aa dhufteerti
Gurgurtaa caalbaasii lafa magaalaa Finfinnee tibbana geggeeffameen lafti meetir iskuweerii 242 qarshii miliyoona 86’tti gurguramuun isii beekame. Lafti nuusa heektaaraa hin caalle tuni kan argamtu nannoo Markaatoo jedhamutti. Gatiin lafa tanaa meetir iskuweeritti (tankaarfii takka) qarshii 355,555 ta’uu isaati. Lafa tana kan bite dhaabbata Siket International jedhamuudha.
Gatiin liizii lafa magaalaa Finfinnee naannoo naannotti addaaddummaa guddaa qaba. Fakeenyaaf gatiin lafa naannoo Kolfee jiddugaleessatti meetir iskuweeritti qarshii 16,750 baasti. Achuma naannoo Kolfeetti lafti mana jireenyaa m² 173 qarshii miliyoona 8.46’tti gurguramuun gabaafameera.
Akka seera liizii itoophiyaatti namni tokko caalbaasii liizii lafaa yoo moo’atu gatii lafa ittiin bite kessaa battalumatti kaffaluun kan isarraa eeggamu lafa jireenyaatiif %10 qofa yoo ta’u lafa daldalaatiif ammoo %20. Maallaqni hafe kan kaffalamee xumuramuun irra jiraatu woggoota 40 keessatti.
Sirni liizii kunis kan labsu lafti kan gurguramtu woggoota 99’f.
Bulchiinsi Magaalaan Finfinnee gurgurtaa lafa 759 qofarraa qarshii biliyoona 4 oli argachuu isaa Addis fortune gabaaseera. Woggaa dabre qofa keessatti bulchiinsi magaalatii liizii lafaa irraa qofa qarshii biliyoona 1.6 sassaabeera.
Gar wolakkeessa magaalaatti hir’inni lafa gurguramuu bulchiinsa magaalattii qunnamaa dhufeera. Rakko kana hir’isuufis jecha naannoolee Ameerikaan Gibbii, Taklahaymaanot, Autobis Taraa fi Meksikoo jedhamanitti manniin heddu kan jiguuf deeman ta’uunis hubatameera.
Previous articleAtleetonni keenya fiigicha Ispeen, Jaappaanii fi Turkitti geggeeffame injifannoon xumuran
Next articleXayyaarri Ruusiyaa biyya Masrii irratti kufe sababa boombiitiin jedhame